Ndeapi ari masimba esimba rehupfumi? | Ehupfumi Zvemari
Ehezve, kana iwe uchizoisa mari yako mukuchengetedza mumisika yequity, iwe unenge usisina sarudzo kunze kwekuziva dzimwe nzvimbo dzinova idzo dzinoratidzira simba rehupfumi hwenyika. Iko vese vatengesi vanoisa maziso avo kuti vazive zvavanofanira kuita nguva dzose. Ehe nzvimbo dzakavhurika mune zvemari midziyo kana, zvinopesana, bvisa zvigaro zvavo mumisika yemari. Nezvakanakira kuti nzvimbo dzemari dzinozokupa nhungamiro pane zvaunofanira kuita mukuita kwako pamusika wemasheya.
Nzvimbo dzesimba rehupfumi hadzisi dzakawanda, asi zvirokwazvo dzakakosha kwazvo. Kusvika pamwero wavanotarisa iyo shanduko yemisika yemari, mune imwe pfungwa kana imwe, sezvakaitika mumakore achangopfuura. Hazvishamisi kuti inogona kuve chishandiso chine simba kuti uwane mari mune yega yega mashandiro auri kuzovhura kubva zvino zvichienda mberi. Kana zvirinani sekudzivirira kwekudyara. Nekuti haugone kukanganwa kuti ivo vanokupa iwe hwakakosha ruzivo nezve iyo chaiyo mamiriro epasirese emari.
Kuti uende kunzvimbo dzechokwadi dzemasimba ezvehupfumi uchafanirwa kuenda kunzvimbo dzekufananidzira dzakadai Washington, Frankfurt kana Vienna. Uye haugone kukanganwa kuti aya mataundi inzvimbo dzemasangano akakosha ehupfumi. Kubva pane izvo zvinopa sarudzo dzakanangana nehunhu dzinokanganisa misika yemari. Dzimwe nguva neakasimba oscillations anokwanisa kusvika 5% uye ayo anonyanya kuita mabasa ekutengesa kana panguva imwechete yekutengesa.
1 Simba nzvimbo: iko kwekutsinhana
2 Vienna, iro guru remafuta
3 Washington kana simba redhora
4 Kumusoro kweMonetary Fund
5 Guta musika wekusarudza
6 Seyero yemaitiro
Simba nzvimbo: iko kwekutsinhana
Panguva ino unogona kunge uchinetseka kuti idzi nzvimbo dzehupfumi dzenyika dziripo. Kunyanya, kuitira kuti iwe ugone kunyatso kuziva kwavo kuendesa mashandiro ako mumusika wemasheya. Dzinogoverwa munzvimbo dzenyika dzese, kunyangwe iri makondinendi eAmerica neEuropean kwaanonyanya kumiririrwa. Nenzvimbo dziri munhau dzenyika huru dzenyika. Hazvishamisi kuti ivo zvakare chikamu vanosarudza pane yako hupenyu hwemari. Kusvikira kune iyo yese vashandi vehupfumi vanoziva sarudzo yavo.
Ehezve, imwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo dzesimba rehupfumi iri chokwadi guta reGerman reFrankfurt. Hazvishamise kuti, iri dzimbahwe zvachose European Central Bank (ECB) inova ndiyo inoraira marongero emari munzvimbo yeeuro uye inotungamirwa nemuItaly Mario Draghi. Yakave uye ichiramba iine hombe musika wekutengesa. Kusvika pakuti inogona kuita kuti misika yezvemari idonhe kana kusimuka chero nguva. Ndokusaka zvisingashamisi kuti chimbo chaunogona kushandisa mashandiro ako mumusika wemasheya.
Vienna, iro guru remafuta
Pedyo zvikuru neguta guru rezvemari reGerman ndiro guta guru reAustria, Vienna. Yakave iri dzimbahwe kwemakore mazhinji eiyo Sangano rePetroleum Exporting Nyika (OPEC). Iko kwakarongedzwa marongero eiyi yakakosha mari yemari. Iko kwainogona kubata mutengo wemafuta asina kuchena zvichibva pasarudzo dzinoitwa nevagadziri veiyi nhumbi yemari. Ehe, iyo misika yemari inozivawo chaizvo zviri kugadzirwa mumisangano iyi nedzimwe dzenyika dzine simba kwazvo pasirese.
Kune rimwe divi, chero sarudzo inoitwa nenhengo dzayo inoshanda kudzikisa kugadzirwa kwavo uye nekudaro mutengo wemafuta unokwira mumisika yemari. Chero kuita sarudzo dzekudyara mumafuta kana, nekupesana, kuburikidza nehunhu hwakabatana zvakanyanya nechinhu ichi chisina kugadzirwa uye zvakanyorwa pamusika wemasheya. Iri izano rinoshanda kwazvo rekuyera kuti kupfura kuchaenda kupi mumavhiki anotevera uye nenzira iyi kuitira kuti mari ichengetedzeke. Sezviri kuitika mumwedzi ichangopfuura nekuvandudzwa kweiyi mari yemari yakapfuura yakakosha nhanho dzemadhora makumi manomwe pabhariri.
Washington kana simba redhora
Guta guru reUnited States rinoramba richive imwe yenzvimbo dzemitsipa yekutevera hupfumi kubva kune yekudyara maonero. Kwete chete nekuti ndiko kugara kwemutungamiriri wenyika yakapfuma kwazvo pasirese. Asi nekuti ndipo panotorwa sarudzo naiye Federal Reserve yeUnited States (FED). Muzvinhu zvese zvine chekuita nemutengo wemari uye nechakanangana nekwese kumatunhu ese epasi. Kusvika padanho rekuti chikamu chakanaka chevashambadziri vanotendeudzira maziso avo kuchikamu chino chenyika kuumba zano ravo rekudyara Zvichienderana nemitemo yemari yavanotora mune ino hupenyu hwakakosha kukosha kwenyika dzese.
Kutaura nezveWashington zvinoreva hukama nemisika yemari. Kunyangwe izvi zviri muNew York, zvinomiririrwa mu Wall Street kunova uko kunoshandisaniswa mamirioni nemamiriyoni emazita mazuva ese. Mune izvo zvinofungidzirwa seimwe yemakomputa ehurongwa hwemazuva ano uye inova poindi yekureva chikamu chakakura chevashambadzi vadiki nepakati pasirese. Kusvika padanho rekuti main stock indices anoenderana nekufamba kunoitika mune ino yakakosha chikamu chenyika. Sezvo zvichange zvamboitika kwauri pane kanopfuura kamwe chiitiko paunenge uchiisa mari uye kuyedza kuita kuti zvinhu zvakaunganidzwa zvibatsire mushure memakore mazhinji ebasa.
Kumusoro kweMonetary Fund
Pasina kusiya nzvimbo imwechete tinowana chimwe chinhu chehukama hwakakosha senge iyo International Monetary Fund (IMF). Kana izvo zvakafanana, uko sarudzo dzakanyanya kukosha dzinoitwa kune ramangwana rehupfumi repasi. Hazvishamisi kuti, yakanangana nekusimudzira marongero ekuwedzera kwehupfumi pakati penyika nekufarira kudyidzana kwemari yenyika dzese. Kana iri sangano repasirese rinozivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti inowanzo gadzirisa kusaenzana kwehupfumi munyika huru dzepasi. Sezvazvakaitika mushure mezvose muchikamu chakanaka chavo, kusanganisira Spain.
Ehezve, misika yese inoziva kune yavo mishumo, uye semhedzisiro yavo iwo masheya indices oscillate mune imwe nzira kana imwe neimwe zvakanyanya kusimba. Kusvika pakukonzera kufamba kwakasimba kwazvo mumisika yemari. Nemi misiyano yakakosha pakati peyepamusoro neepasi mitengo yemasecurity uye ayo mune dzimwe nguva anogona pfuura 2% kana 3% mazinga. Zvakawanda kwazvo kune vanofarira vafungidziri vemari vanoona kuti munguva pfupi vanogona sei kuwana yakakosha portfolio yemari inowanikwa. Nguva dzose uchiziva zvinogona kutaurwa neInternational Monetary Fund chero nguva.
Guta musika wekusarudza
Mukondinendi yeEurope, London inoita basa rakakosha kwazvo mune zvemari dzenyika dzese. Pamusoro pemamwe misoro mikuru nehupo chaihwo muhukama hwepasi rose. Hazvishamise kuti guta guru reBritain rinoonekwa seimwe yenzvimbo huru dzekudyara. Kwete chete mumusika wekutengesa, kana zvisiri zvemhando ipi neipi yemari. Mbishi zvigadzirwa, simbi dzakakosha uye zvigadzirwa zvemari pakati pezvimwe zvakakosha pane kwaungaite kuchengetedza kunobatsira kubva ikozvino. Zvese zvinotengwa nekutengeswa muGuta uye zvinoitika kuva chirevo kune chero musimari. Uye hazvikanganwike kuti chikamu chakanaka chevamiriri vezvemari kutenderera pasirese chakasimbiswa.
Iyo paradigm yekudyidzana kwenyika sezvazviri munzvimbo dzese dzehupfumi hwenyika uye semashoma emari emari anoita panguva ino chaiyo. Zvese izvi kunyangwe zvichangobva kuparadzaniswa nemasangano eEuropean semhedzisiro yebrexit iyo yakatenderwa gore rapfuura. Asi izvo hazvina kudzora kubva pakukosha kwenzvimbo ino yeEuropean mune nyowani yezvemari. Hazvishamise kuti UK equities ndeimwe yezvakanyanya kukosha pasirese. Nenhamba yekutengesa yepamusorosoro pamisika yese yepasi rese yemasheya.
Sezvaungave iwe waona, kune akati wandei nzvimbo dzesimba rehupfumi kubva kwaunogona kuve nereferensi yekutora zvinzvimbo mumusika wemasheya kubva ikozvino zvichienda mberi. Nechinangwa chekutanga chekuvandudza yako wega zvinhu. Nekuti iwe unenge uine rumwe ruzivo yekuishandisa nazvo pasarudzo dzauchazoita. Kwete chete kana zvasvika pakushambadzira chaiko mumusika wemasheya. Kana zvisiri izvo zvinopesana, sarudza dzimwe nzira dzekugadzirisa idzo kusvika parizvino ungadai usina kufunga nezvekuita kuchengetedza kwacho kunobatsira.
Ehe, iwe haugone kukanganwa kuti aya emari nzvimbo dzinogona kuve mhinduro yekusimudzira yakanyatsotsanangurwa nzira yekudyara. Mune izvo, pamusoro pazvose, kuve nematurusi ekuongorora kuti uwane sarudzo dzakanakisa. Pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga uye kunyangwe kubva kune yakasarudzika poindi yekutarisa. Zvekuti nenzira iyi unozadzisa zvinangwa zvako zvese mumusika wemasheya. Nemhedzisiro iri nani muaccount yako yekudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeapi ari masimba esimba rehupfumi?
Chii chiri kushanda capital uye inoshandiswa sei kune yako kambani?